Iran oo beenisay sheegashada xubin ka tirsan al-Qaacida oo lagu dilay Tehran | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Iran oo beenisay sheegashada xubin ka tirsan al-Qaacida oo lagu dilay Tehran
Iran oo beenisay sheegashada xubin ka tirsan al-Qaacida oo lagu dilay Tehran
Tehran waxay sheegtay in Washington iyo Israel ay isku dayayaan inay horumariyaan ‘warka dagaalka’ ee ka dhanka ah Iran.
Xiisadaha udhaxeeya Tehran iyo Washington ayaa si isdaba joog ah u kordhay kadib markii Mareykanku si kali kali ah uga baxay heshiiskii Nukliyeerka Iran ee 2018
Tehran ee dalka Iran ayaa diiday sheegashooyinka ah in sarkaal sare oo Al-Qaacida ka tirsan lagu dilay magaalada Tehran bishii Ogosto oo ay dileen hawl wadeennada Israa’iil, iyadoo uga digtay warbaahinta Mareykanka inay ku dhacaan “Hollywood-u-samaynta muuqaalka Hollywood” ee saraakiisha Mareykanka iyo Israel.
Hadal uu soo saaray Sabtidii, saacado ka dib maqaal uu qoray New York Times ayaa lagu sheegay in hogaamiyihii labaad ee ugu sareeyay Al-Qaacida lagu dilo Iran, afhayeenka wasaarada arimaha dibada Saciid Khatibzadeh wuxuu sheegay in “argagixisada” loo aasaasay natiijada ka dhalatay siyaasadaha Mareykanka ee ku fashilmay gobolka.
Si looga fogaado mas’uuliyadda falal dambiyeedyada kooxdan iyo kooxaha kale ee argagixisada ee gobolka, Washington iyo Tel Aviv marba marka ka dambeysa waxay isku dayaan inay Iran u sawiraan inay ku xiran tahay kooxahan iyada oo loo maleynayo been abuur iyo u gudbinta macluumaadka been abuurka ah ee warbaahinta. ”Ayuu yidhi.
The Times oo soo xiganeysa saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Muhammad al-Masri, oo lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay labo weerar oo lagu hoobtay safaaradihii Mareykanka ee Afrika sanadkii 1998, waxaana dilay labo gacan ku dhiigle Mooto Bajaaj 7dii Ogosto.
Waa la dilay, warbixinta ayaa lagu sheegay, isaga iyo gabadhiisa Miriam, oo uu ka dhintay wiilkii Osama bin Laden ee Hamza bin Laden.
Ka dib markii uu soo ifbaxay warka toogashada, warbaahinta wararka ee Iiraan waxay u aqoonsatay dhibanayaashu inay yihiin borofisar taariikhda Lubnaan ah Habib Daoud iyo gabadhiisa Maryam. Kanaalka wararka Lubnaan iyo tiro ka mid ah baraha bulshada ee aan rasmiga ahayn ee baraha bulshada ee Iiraan ayaa sheegay in Daoud uu xubin ka ahaa Hezbollah, kooxda Iiraan ee taageerta siyaasadda iyo hubaysan ee Lubnaan.
Laakiin warbixinta Times ayaa sheegtay in Daoud uu ahaa magac saraakiil reer Iiraan u bixiyeen al-Masri oo shaqadii barista taariikhda ay ahayd mid daboolan.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in ujeedka Iran ee ah inay sii haysato al-Qaacida, oo ah cadowga qadhaadh ee Tehraan, laga yaabo inay tahay inay bixiso caymis ah in kooxdu aysan wax hawlgal ah ka fulin doonin gudaha Iran ama aysan ka fulin doonin hawlgallo ka dhan ah Maraykanka.
Hadalkiisii ​​Sabtidii, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda ee Iiraan wuxuu ku sheegay in Mareykanku uusan ka fogaan inuu faafiyo sheegashooyin been abuur ah oo ka dhan ah Iiraan horay.
Khatibzadeh ayaa yidhi “Laakiin qaabkani waxa uu noqday mid soo noqnoqda oo hoos yimaada maamulka hadda jira ee Maraykanka, Aqalka Cad ayaa isku dayay in uu horumar ka sameeyo qorshahooda Iranophobia iyada oo lagu celcelinayo eedeymahaas.”
Wuxuu yiri shaki kuma jiro in eedeymaha noocan oo kale ah lagu soo oogay qaab “dagaal dhan walba ah oo dhaqaale, macluumaad iyo maskaxeed oo ka dhan ah dadka reer Iiraan” wuxuuna ku booriyay warbaahinta inay awood u siiso faafinta beenta la bartilmaameedsanayo.
Xiisadaha udhaxeeya Tehran iyo Washington ayaa si isdaba joog ah usii kordhayay kadib markii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii May 2018 kaligiis ka laabtay heshiiskii Nukliyeerka Iran ee 2015 ee ay la gashay quwadaha adduunka isla markaana uu saaray cunaqabateyn adag.
Iran, oo sidoo kale la tacaaleysa masiibada ugu ba’an ee COVID-19 ee Bariga Dhexe, waxay ugu yeertay cunaqabateynta is dul saaran “argagixiso dhaqaale iyo mid dhexdhexaad ah”.
Bishii Janaayo, Mareykanku wuxuu Ciraaq ku khaarijiyay jeneraalkii ugu sarreeyay Iran Qassem Soleimani iyadoo loo adeegsaday duqeyn diyaaradeed, taas oo xiisadda u horseeday meel kulul. Iiraan waxay kaga jawaabtay inay gantaalo ku garaacdo laba saldhig oo Mareykanku ku leeyahay Ciraaq weerar aan wax khasaaro ah geysan.
Previous articleMaamul Goboleedyada Qaar iyo mucaaradka Dowlada oo Gudi Doorasha magacabaayo iyo Farmaajo oo wal wal xoogan soo wajahay
Next articleWar deg deg ah Col Ahmed Adan oo ku heeb ah Madaxweyne Farmaajo oo Toogtay Xidigle Maxamed Cali Seef oo ku heeb ah Ra iisal wasare Rooble